"Imvula yoMntu" - ngokungaqinisekiyo ifilimu yaseHollywood eyayinamandla ngokwengqondo, ngezinye iinkhathi yathandabuza i-autism njengento. Enyanisweni, sisifo esibi kakhulu, phantse singenakho ukufumana unyango. Ingqondo ingumzimba onzima kakhulu kwaye ungacacanga womzimba womntu, kukuthi esi sifo senziwa. Ingcaciso ecacileyo ye-autism njengento yokubakho komuntu ayikho, kodwa isekelwe kwi-etymology yelizwi, umntu ophetheyo "uyangena kuye." Yayiyinkcazo (ukusuka kwi-autos yamaGrike-ngokwayo, ngokwayo) eyafunyanwa kwi-1943 ekude ne-psychiatrist uLoan Kanner, owawubona iimeko ezili-11 zesifo esifanayo esingaziwa ngaphambili.
Ukuphuhliswa kwabantwana njengengxaki
Ukuxilongwa ngokuchanekileyo kufuneka kwenziwe emva kwecandelo leemviwo zomntwana ngugqirha njengengqondo yesifo sengqondo, ensimini yakhe, eqinisweni, isifo eso. Ingxaki ebaluleke kakhulu ebhekene nabazali be-autistic abantwana yintuthuko elandelayo yomntwana. Emva koko, esi sifo sinezinto ezininzi kwaye kukho izinto ezininzi ezahlukahlukeneyo. Ngokomzekelo, kunye nesimo esibi kakhulu sesifo, intambo epheleleyo yomntu evela kwihlabathi langaphandle liyabonwa. Ingcinga yokuba ingqondo yesigulane igqitywe ngohlobo lwecocoon, akunakwenzeka ukuba uphume kuyo. Kwinye iqela lezigulane, kukho i-conservatism engapheliyo, apho babonisa khona ubuchule kwinto abayithandayo, yonke into iyayinqatshwa. Kwabo bantu abasondeleyo kunabantu abaqhelekileyo, ubukho bokuzikhusela kwizenzo, ubungozi obukhulu kunye nokukhuseleka bubunjani. Kukho ukuxhomekeka ngamandla kwiimeko ezikufutshane, okokuqala, kubazali. Ezi zigulane zikhokelwa ngumbono othi "ukuchaneka" kukho konke.
Ukuphuhliswa kwamakhono kwi-autistic children
Uphuhliso lwezakhono ezahlukeneyo kubantwana abane-autism sele lide lusetyenziswa ngophando lobalo. Iingcali ziqinisekisa ukulingana kwengqondo yophuhliso lwabalandeli, abalingana nama-70 amanqaku angama-100 avelayo. Kuya kuba i-10% yezigulane ezine-autism zinamandla okubala, ngelixa abantu abaqhelekileyo lo mfanekiso ungaphakathi kwe-1%. Enyanisweni, nanko ukungafani kophuhliso lwengqondo kubaluleke kakhulu kwimvelo. Ukuba abanye abantwana banako ukucombulula ukulingana kweemathematika kunzima kakhulu, ukukopisha abaculi abakhulu kwiinkcukacha ezincinci, ngoko abanye, uninzi, basondelene kakhulu ne-oligophrenics kwintlalo jikelele. Imithombo yokungalingani, ngokukodwa ukuvela kwamandla angavamile, ayifumanekanga kwisayensi kuze kube ngoku. Uphando kunye noonxibelelwano kunye nabalandeli bakhokelela, ngokukodwa, kwenkcazelo enye izigulane ngokwabo "zibona" ​​izisombululo ezilungiselelwe phakathi kwamanani kunye namagama. Iinkalo eziphambili apho ubuchule obuhlukeneyo bokubandezeleka kwesi sifo kubonakalisa ngokwabo ziyimathematika, umculo, ukupenda kunye nokuyila. Abagunyazi banesici esinye sezibonakaliso, okufuna umnqweno kuyo yonke into. Kukhona umnqweno ongezantsi wokuguqula naluphi na ukungcola kwisimo esomeleleyo, esivaliweyo.
Ukuphuhliswa kwamandla anjalo kwihlabathi leNtshona kunomcimbi wokuxhalabisa okhethekileyo kwinqanaba labasemagunyeni kwaye kungekhona kuphela. Amaziko afanelekileyo ekunyamekeleni nasekufundweni kwe-autistics ayenziwe, kwaye abo banikwe "ingqondo ye-genius" bakhuliswa kwaye basebenzise ukudala iintlobo ezahlukeneyo kwihlabathi lonke. Ngoko, ngokweengxelo ezingaqinisekanga, iMicrosoft isebenzisa phakathi ko-5 no-20% wabasebenzi be-autistic. Le ndlela ngokuqinisekileyo ifanelekile ngenhlonipho, nangona kunjalo, ngakwinye icala, izinga lokukhula kwesi sifo landa rhoqo ngonyaka, kwaye akukho mzekelo kufuneka ukuba amehlo athile asondeleyo, kwanobuchule be-10%.
Iingongoma ezili-10 ezingenakuthethwa kumntwana
Indlela yokugcina abantwana abanomdla ekufundeni kwintsapho
Impembelelo yomculo ekuphuculweni ngokomzimba kwabantwana
Umntwana akafuni ukufunda ukufunda
U-Alexey Panin wamothusa abasebenzisi bakhe be-Instagram ngesenzo esihle, ividiyo
Umququ we-yoghurt, i-basil kunye neetatayi
Ukupheka okumnandi kwiikhosi zokuqala
Iqoqo elinganiselwe lamabhanki aseDima Bilan kuphela ku-Oriflame
Iitartlets kunye nomzimba, iziqhamo kunye noshizi
Imveliso kunye nemithetho ephambili yokutya kwiprotheni
I-Horoscope yonyaka onyaka-2010 weePisces
Ubuqili bobugcisa bokutya: umqulu omnandi wengulube
Iipulo kunye ne-sinamoni kwi-microwave
Ukudlala itafile yeetennis
Imodi ye-chaos: indlela yokubuyisela ama-biorhyth yakho
Amaqanda atyhidiweyo - njani kwaye ukupheka kangakanani?
Izizathu zesikhumba esinengxaki